चिनमा फेरी अर्को रोगको प्रकोप देखियो, कुलमान घिसिङ गएपछि नेपालमा लोडसेडि बढेको हो ? हेर्नुहोस असोज ६ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
चिनमा फेरी अर्को रोगको प्रकोप देखियो, कुलमान घिसिङ गएपछि नेपालमा लोडसेडि बढेको हो ? हेर्नुहोस असोज ६ गतेका मुख्य समाचारहरु
पछिल्लो समय विद्युत कटौती बढेको गुनासा सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेका छन् । पूर्वसूचना नदिई घण्टौं लाइन काटिनुलाई धेरै उपभोक्ताहरुले कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँग जोडेका छन् । आम उपभक्ताको आशंका छ, अब फेरि लोडसेडिङ हुने त होइन ?
मन्त्री पुनको सचिवालयले पूर्वजानकारी बिना विद्युत सेवा नियमित नभएको अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीको सचिवालय वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल खबर गर्न अनुरोध गरेको छ र, सचिवालयको हटलाइन ११५१ मा २४ सै घण्टा वा ९८५११०९८३५ मा फोन गर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।हेर्नुहोस असोज ६ गतेका मुख्य समाचारहरु :